I-oda elanele? Ama-oda wokuhweba angaphandle ayashisa? Isibikezelo semakethe yensimbi engagqwali!
Ngemuva kokukhuphuka kweviki, njengoba izinsizakusebenza zezigayo ezinkulu zensimbi zibekiwe ekugcineni zilandelana, kepha umfula ongaphansi awukangeni emakethe, imakethe eshisayo ihlehlile, kanti nentengo yensimbi engagqwali iyehla . Usuku lokuthengisa lwangoFebhuwari seluphelile. Ngakho kanjani ...Funda kabanzi »
Isikhathi Iposi: Feb-24-2021
Ukunikezwa amandla kwedijithali! Ucwaningo oluzimele kanye nokuthuthuka kwale nkampani yensimbi engagqwali eSongyang inamandla amakhulu!
Njengenye yezinkampani zamapayipi zensimbi engagqwali zikaSongyang, iShangshang Desheng Group Co, Ltd. izibophezele ekwakheni ifektri ehlakaniphile selokhu yazinza eSongyang ngo-2014. Kulezi zinsuku, inkampani ibona ubuhlakani kuzo zonke izici zezinto zokusetshenziswa, ukukhiqizwa, ikhwalithi ukuhlolwa, a ...Funda kabanzi »
I-chromium ephezulu iyaqhubeka nokubiza, kepha insimbi engagqwali ayikhuphuki kahle kangako
Ngemuva kweholide elide lomkhosi wasentwasahlobo, intengo ye-chromium ephezulu inyuke ngokushesha ngemuva kokuvulwa kwemakethe. Kuze kube manje, izingcaphuno ezijwayelekile zabakhiqizi be-chromium abaphezulu zikhuphuke ngama-yuan 300 / amathani wesisekelo angama-50 ngemuva kweholidi laya kumathani ayisisekelo we-8,800-9000 yuan / 50, ngokushesha ...Funda kabanzi »